Nin Sabab fudud Ceejo Ugu Dilay Xaaskiisa Oo Lahayd Uur Shan Bilood Ah - Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»Nin Sabab fudud Ceejo Ugu Dilay Xaaskiisa Oo Lahayd Uur Shan Bilood Ah
Nin 30 sano jir ah ayaa dil fool xun kula kacay xaaskiisa kadib markii haweeneyda uu qabay ay aaday qaraabadeeda iyadoo aanan u sheegin.
Haweeneyda uu ninkeeda dilay ayaa ahayd xaamilo, waxana uu dilkeeda ka dhacay degmada lagu magacaabo Ambedkar Nagar ee Koonfurta magaalada Delhi caasimadda India.
Eedeysanaha oo lagu magacaabo Vijay, ayaa dilka xaaskiisa kadib tagay saldhigga boliiska Ambedkar Nagar isagoona saraakiisha u sheegay inuu dilay xaaskiisa.
Siyaabaha La Isaga Joojiyo Inaad Ku Noolaato Shalaay Ama Qoomamo
Koox ka tirsan boliiska oo loo diray guriga faldambiyeedku ka dhacay ayaa qolka jiifka kasoo helay meydka haweeneyda oo uu qoorteedu ka muuqday in Ceejo lagu dilay.
Intii su’aalaha la weydiinayay eedeysanaha waxa uu sheegay in xaaskiisa ay la murantay kadibna uu ceejiyay.
Haweeneyda la dilay oo lagu magacaabi jiray Hemalata, ayaa la sheegay inay lahayd uur 5 bilood ah.
Waxay aaday gabar la dhalatay ninkeeda oo daris la ah xilli uu maqnaay seygeeda Vijay. Kahor inteysan guriga tagin ayaa waxaa guriga kaga hormaray ninkeeda isagoo aad u carooday markii uu arkay in xaaskiisa ay guriga ka maqantahay.
Markii Hemalata, ay dib ugu soo laabatay guriga, lamaanaha ayaa waxaa dhexmaray muran xoogan iyadoo markii dambe Vijay uu ceejiyay xaaskiisa sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay wargeyska The Times of India.
Gabar la dhalatay haweeneyda la dilay oo lagu magacaabo Asha, ayaa sheegtay in Vijay uu jirdil u geysan jiray Hemalata una diidi inay qof la kulanto.
Eedeysanaha ayaa waxaa laga xareeyay (Dil) sida ku xusan qeybta 302 sharciga ciqaabta India.
maria geedi says:
Su.aal dumar dada ayey dhalmadaayaan imisa jir
Sawirro: Haweeney ku dhalatay gacmo la’aan & Jilbo La’aan oo aqal galeysa kadib markii Dhaqaatiirtu ay horey ugu sheegeen inaysan….